USA oo liiska dadka lidka ku ah amniga dunida ku dartay Axmed Godane iyo xuno kale oo Shabaab ah – Radio Daljir
USA oo liiska dadka lidka ku ah amniga dunida ku dartay Axmed Godane iyo xuno kale oo Shabaab ah
Seteembar 9, 2013 6:52 b 0
Washington, September 9, 2013 – Dowladda Maraykanka ayaa saraakiil kala duwan oo caalamka jooga ku dartay liiska dadka loo aqoonsan yahay in ay khal-khalka ku hayaan amniga dunida, waxaa saraakiishaas ka soo dhex muuqday xubno sare oo ka tirsan ururka al-shabaab.
Liiska cusub oo dhowaan soo baxay ayaa lagu daray 4 sarkaal oo ka tirsan Al-shabaab, kuwaas oo qaarkood Maraykanku lacag ku raadinayo, lacagtaas oo abaal-marin loo siinayo cidii soo sheegta meelaha ay joogaan, waxaana aad looga baadi-goobaa haatan gudaha Soomaaliya.
Afarta sarkaal ayaa kala ah hugaamiyaha sare ee al-shabaab Axmed Cabdi Godane oo loo yaqaan Abu-Zubeyr, Sheikh Mukhtaar Roobow Abu-Mansuur, Sheikh Xuseen Cali Fiidow iyo Fu?aad Axmed Shangole, saraakiisha ayaa la sheegay in ay u taliyaan ilaa 6.000 oo dagaal yahan oo ka tirsan Al-shabaab.
Docda kale saraakiisha ayaa ku eedeysan dhamaantood in ay yihiin asaasayaaashii ururka Al-shabaab, USA waxay sheegtay in ururku uu khal-khal iyo amni xumo ka abuuray gobolka Barriga Afrika, sidoo kale waxaa jirta mar kasta cabsida laga qabo qaraxyada al-shabaab ee xaruumaha waa weyn ee gobolka.
War-bixinta waxaa lagu sheegay sababta loo xulay saraakiisha in ay tahay kadib baaris dheer oo lagu sameeyey dabeecadooda iyo waxay aamisan yihiin, xubno uu ku jiro Shangole iyo Abu-Mansuur ayaa la soo hadal qaaday, waxaa lagu sheegay in ay aamisan yihiin in ay ku jiraan Jihaad, taas oo ay ku fuliyaan amaro badan oo dhibaato geysta, sheikh Roobow ayaa la xusay in uu tababaro caalami ku qaatay Afghanistan.
USA waxay dul-dhigtay Abu-Zubeyr, Sheikh roobow iyo shangole Malaayiin Dollar, in kastoo aan weli lagu guuleysan talabaadaasi, liiska waxaa ka dhex muuqday sidoo kale hugaamiyaha sare ee Al-Qaacida? Dr. Ayman Al-Zawaahiri iyo hugaamiyaha ururka Taalibaan ?Mullah Cumar, waxaa kaloo lagu daray madax ka tirsan uruka Boko-Haram ee Nigeria.